Andramo Andriamanitra amin'ny fahatsapanao rehetra - Church of God Switzerland of the World Switzerland
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2019-01 > Hahafantatra an'Andriamanitra amin'ny saina rehetra
Azoko antoka fa mivavaka isika rehetra mba hanome an’Andriamanitra fahafahana ny olona tsy mino izay tiantsika - fianakaviana, namana, mpiara-monina, ary mpiara-miasa. Samy manana ny fomba fijeriny momba an’Andriamanitra ny tsirairay amin’izy ireo. Ilay Andriamanitra eritreretinao ve ilay Andriamanitra telo izay iray naseho tao amin’i Jesosy? Ahoana no ahafahantsika manampy azy ireo hahafantatra an’io Andriamanitra io amin’ny fomba manokana? Hoy i Davida Mpanjaka: “Andramo ka izahao fa tsara Jehovah!” ( Salamo 34,9 Fandikan-teny Genève Vaovao). Ahoana no ahafahantsika manampy azy ireo hamaly io fanasana io? Tsy fisolokiana ara-barotra izany - i David dia manondro ny fahamarinana lalina izay ahafantaran'Andriamanitra ny tenany amin'izay rehetra mitady Azy. Manasa antsika ho amin’ny fifandraisana maharitra sy manova fiainana amin’Andriamanitra izay mahafaoka ny lafiny rehetra amin’ny fisiantsika olombelona Izy!
Manandrana fa tsara fanahy ny Tompo
Tsirony? Eny! Ny mahatsapa ny fahatsaran'Andriamanitra tonga lafatra dia toy ny sakafo matsiro na zava-pisotro mamelona ny lela. Mieritrereta bittersweet, miadana tsikelikely sôkôla na divay mena miloko mirindra izay mifanodidina ny lelanao. Na eritrereto ny tsirony afovoan-kena mifangaro menaka mifangaro mifangaro amin'ny mason-tsira mifangaro sira sy zava-manitra. Misy zavatra mitovy amin'izany mitranga rehefa fantatsika ilay Andriamanitra nambara tamin'i Jesosy. Irintsika ny fifaliana mahafinaritra amin'ny hatsarany mba haharitra mandrakizay!
Ny fisaintsainana ny harenan’ny maha Andriamanitra telo izay iray sy ny fahasarotan’ny lalany dia mahatonga ny hanoanana ny zavatr’Andriamanitra. Hoy i Jesosy: “Sambatra ny hoderaina izay noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no ho voky » (Mat 5,6 Fandikan-teny Genève Vaovao). Rehefa mahafantatra an'Andriamanitra manokana isika, dia maniry ny rariny - ny fifandraisana tsara sy tsara - tahaka an'Andriamanitra. Indrindra fa rehefa ratsy ny zava-misy, io faniriana io dia mafy loatra ka maharary toy ny noana na mangetaheta. Hitantsika teo amin’ny fanompoan’i Jesosy tamin’ny manodidina azy sy ny fahoriany ho an’ireo izay mandà an’Andriamanitra izany. Hitantsika izany amin’ny faniriany hampihavana ireo fifandraisana—indrindra fa ny fifandraisantsika amin’ny Rainy any an-danitra. Jesosy, ilay Zanak’Andriamanitra, dia tonga mba hanorina ny fifandraisana tsara sy mahafa-po amin’Andriamanitra — mba handray anjara amin’ny asan’Andriamanitra amin’ny fanamboarana ny fifandraisana rehetra. Jesosy mihitsy no mofon’aina mahafa-po ny hanoanana lalina sy ny fanantenantsika fifandraisana tsara sy marina. Andramo fa tsara fanahy ny Tompo!
Jereo fa tsara ny Tompo
Jereo? Eny! Amin'ny alalan'ny masontsika no ahitantsika ny hatsaran-tarehy sy ny fahitana ny endrika, ny halavirana, ny fihetsehana ary ny loko. Tsarovy ny mahakivy rehefa sarona ny zavatra tena tiantsika ho hita. Eritrereto ny mpitsikilo mazoto mandre ny feon’ny karazam-biby tsy fahita firy, nefa tsy mahita azy. Na ny fahasorenana amin'ny fiezahana hitady ny lalanao manodidina ny efitrano maizina tsy mahazatra amin'ny alina. Dia diniho izao manaraka izao: Ahoana no ahafahantsika miaina ny hatsaram-pon’Andriamanitra izay tsy hita maso sy mihoa-pampana, izay tsy takatry ny saintsika olombelona? Io fanontaniana io dia mampahatsiahy ahy ny zavatra nangatahin’i Mosesy, angamba somary sosotra, tamin’Andriamanitra: “Avelao aho hahita ny voninahitrao!” Namaly toy izao Andriamanitra: “Ny fahatsarako rehetra dia havelako handalo eo anatrehanao.” (2. Mon 33,18- iray).
Ny teny hebreo ilazana ny voninahitra dia “kabod”. Ny dikan-teny tany am-boalohany ho an'ity dia lanja ary nampiasaina hanehoana ny famirapiratan'ny fahafenoan'Andriamanitra (hita amin'ny rehetra ary fifaliana ho an'ny rehetra) - ny hatsarany rehetra, ny fahamasinany ary ny fahatokiana tsy misy kilema. Rehefa mahita ny voninahitr’Andriamanitra isika, dia esorina izay rehetra takona ary hitantsika fa tena tsara Andriamanitra telo izay iray ary mahitsy mandrakariva ny lalany. Noho ny voninahitry ny fahamarinany sy ny fahamarinany, Andriamanitra dia tapa-kevitra ny handamina ny zava-drehetra. Ilay Andriamanitsika, izay manana fiadanana sy fitiavana manome fiainana, dia manohitra ny ratsy rehetra ary manome antoka fa tsy hisy hoavy ny ratsy. Andriamanitra telo izay iray dia mamirapiratra amin’ny voninahiny ary manambara ny toetrany sy ny fanatrehany – ny fahafenoan’ny fahasoavany feno famindram-po sy marina. Ny fahazavan’ny voninahitr’Andriamanitra dia mamirapiratra ao anatin’ny haizina ary manambara ny famirapiratan’ny hatsarany. Jereo fa tsara ny Tompo.
Ny fahafantarana ny Triune Andriamanitra dia tsy toy ny mitelina sakafo sakafo haingana na mijery tsy mijery video minitra telo. Mba hahafantaranao ilay Andriamanitra nambara tamin'i Jesoa Kristy, dia ilaina ny esorina amin'ny masontsika ireo jamba ary miverina amin'ny laoniny ny tsiro. Midika izany hoe sitrana tamin'ny fomba mahagaga hahitana sy hanandrana an'Andriamanitra ho tena toetrany. Ny hetahetantsika tsy lavorary dia marefo ary simba hahatakatra ny fahafenoana sy ny voninahitr'Andriamanitsika tsy misy haja. Ity fanasitranana ity dia fanomezana sy asa iray mandritra ny androm-piainana - dia fomba fitsidihana nahafinaritra sy mahafinaritra hita. Toy ny sakafo manankarena izany, izay hipoahan'ny tsirony amin'ny làlana maro, isaky ny mandeha mihoatra ny teo aloha. Toy ny andiany manintona izay misy fizarana tsy hita isa - izay azonao jerena, fa tsy ho reraka na mandiso fanantenana mihitsy.
Na dia dian’ny fitadiavana aza izany, dia mihodinkodina eo amin’ny lafiny iray ifotony ny fahafantarana an’Andriamanitra telo izay iray amin’ny voninahiny rehetra — izay hitantsika sy fantatsika amin’ny tenan’i Jesosy. Amin'ny maha Imanoela (Andriamanitra miaraka amintsika) dia Izy no Tompo sy Andriamanitra tonga olombelona hita maso sy azo tsapain-tanana. Lasa iray amintsika i Jesoa ary niara-nipetraka tamintsika. Rehefa mijery azy araka ny asehon’ny Soratra Masina isika, dia mahita Azy izay “feno fahasoavana sy fahamarinana” ary mahita ny “voninahitry” ny “Zanakalahy Tokana izay avy amin’ny Ray” (Jaona. 1,14 Fandikan-teny Genève Vaovao). Na dia “tsy mbola nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana... ny Zanakalahy Tokana no nanambara Azy tamintsika, dia Izy, Izay Andriamanitra sady mipetraka eo anilan’ny Ray” (Jaona. 1,18 Fandikan-teny Genève Vaovao). Mba hahitana an’Andriamanitra araka ny tena maha izy azy, dia tsy mila mijery lavitra noho ny Zanaka isika!
Mandehana ary aparitaho ny teny
Ny Salamo faha-34 dia maneho ny sarin'ilay Andriamanitra tokana izay tsara fanahy, marina, be fitiavana ary manokana - Andriamanitra izay maniry ny zanany hahatsapa ny fanatrehany sy ny fahatsarany ary manafaka azy ireo amin'ny ratsy. Miresaka momba an’Andriamanitra iray tena misy izy ka miova mandrakizay ny fiainantsika ary maniry azy sy ny lalany ny fontsika, toa an’i Mosesy. Izany no Andriamanitra telo izay iray izay ampahafantarinay ny olon-tiantsika sy ny olon-tiantsika. Amin’ny maha-mpanara-dia an’i Jesosy antsika, dia antsoina handray anjara amin’ny asa fitoriana ny filazantsaran’ny Tompontsika isika amin’ny fizarana ny filazantsara (vaovao mahafaly) fa tena Andriamanitra tsara tokoa ny Tompo. Andramo, jereo, ary lazao fa tsara Jehovah.